Kuuriyada Waqooyi oo dhaleecaysay go’aanka Donald Trump ee Qudus. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Kuuriyada Waqooyi oo dhaleecaysay go’aanka Donald Trump ee Qudus.
Kuuriyada Waqooyi oo dhaleecaysay go’aanka Donald Trump ee Qudus.
Muqdisho(SONNA):–Afhayeenad u hadashay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa daboolka ka qaaday in go’aanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku wajahan u aqoonsiga magaalada Qudus Caasimadda Israel uu yahay mid cadeynaya laba wajiilnimada dhabta ee Mareykanka.
Waxayne afhayeenadu talaabadaasi uu qaaday Mareykanka ku si feysay ku xad-gudub dhanka shuruucda Dowliga ah iyo kan mujtamaca bulshada caalamiga ah,uuna go’aankaasi mudan yahay cambaareyn Caalami ah.
Sida ay maanta qortay Wakaalada wararka ee Kuuriyada Waqooyi in qaraaka uu gaaray Donald Trump uusan aheyn mid Kedis ah ee lala yaabo, balse uu daliil u yahay xaaladaha iyo dhagarta dhabta ee uu Madaxweyne Trump caadaystay in uu dunida kula dhaqmo,wuxayna intaa raacisay afhayeenada in cawaaqibka ka dhasha Ictiraafka Qudus ee Caasimada israel ay qaadayso dowladda Mareykanka.
Afhayeenadda waxay ka loo cadeysay in qadiyada shacabka falastiin ay tahay mid lama taab taan ah ayna lagama maarmaan tahay in lagu xaliyo hab cadaalad ku saleysan iyo xuquuqda Falastiin iyo waliba deganaasha mandiqada bariga dhexe.
Wuxayna Afhayeenadda u hadashay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kooriyada Waqooyi ay hadalkeeda ku soo gaba-gabeysay inay dowladeedu ay si adag u canbaaraynayso hab dhaqanka Madaxweynaha Mareykanaka ee ku wajahan Qudus, sidoo kale ay taagero hiil iyo hooba la garab taagan tahay shacabka falastiin iyo dowladaha caraabta oo uu taagan in falastiin ay hesho xuquuqdeeda sharciga ah.
Sida laga warqabo arbacdii la soo dhaafay ayay aheyd markii uu Madaxweynaha Maraykanka uu ku dhawaaqay in Qgus ay tahay caasimadda israel, isla markaana u rarayo Safaaradda Mareykanka, talabadaasi oo uu ka la kulmay canbaareyn caalami ah.
Israel ayaa waxay qabsatay magaalada Qudusta bari sanadkii 1967,iyadoo sanadkii 1980 ay Israel sheegtay inay ku darsatay Qudusta galbeed oo ay haysato ilaa sanadkii 1948 dii, iyadoo mujtamaca dowliga ah ay si adag uga soo horjeesteen talaabadaasi ay israel qaaday xiligaas.
Previous articleRa’iisul Wasaare Khayre “Ciyaaraha waxay ka qeyb qaataan Nabadda iyo Horumarka dalka”
Next articleRaiisul-wasaare ku xigeenka oo ka qeybgalay maaalinta Qowmiyadaha Itoobiya +Sawirro